'Andicingi ukuba ufikelele kwinqanaba likaKofi kunye no-Big E abanalo' -I-WWE Star yangaphambili kwiXavier Woods (Exclusive) - Wwe
'Andicingi ukuba ufikelele kwinqanaba likaKofi kunye noBig E abanalo' -Owayesakuba yiWWE Star kuXavier Woods
Umsebenzi womSuku oMtsha kwi-WWE ubenza ukuba babe liqela elomeleleyo lokuba lelona qela libalaseleyo kwesi sizukulwana.
UKofi Kingston, uXavier Woods, kunye no-Big E bahlaziye imisebenzi yabo eyehla ngoSuku olutsha. Ngaphandle kwemizabalazo yokuqala, i-trio yavela kwaye yaqinisekisa ukuba impumelelo sisiqinisekiso.
Ngexesha lesiqendu samva nje se-UnSKripted ye-Sportskeeda Wrestling, UGqr Chris Featherstone yamkele i-WWE Superstar u-Eric Escobar kwiseshoni ye-Q & A ebandakanyekayo, ngexesha apho wayethetha ngeqela elidumileyo le-WWE.
indlela yokuyeka ukulindela
U-Eric Escobar wachitha iminyaka emihlanu kwi-WWE de wakhululwa ngo-2010, kwaye ixesha lakhe elininzi lahamba kwiinkqubo zophuhliso ezahlukeneyo zenkampani.
Inkwenkwezi yasePuerto Rican yayingumntu othembekileyo ophumelele i-Florida Championship Wrestling (FCW) isihloko sehlabathi kumdlalo obonisa uSheamus, uDrew McIntyre noC Curtis Axel. Wayekwalifutshane uVickie Guerrero's on-screen onomdla wothando kwiSmackDown.
Ngelixa wayethetha ngesihloko setalente efanelekileyo yokuba bafumane okufanelekileyo kwi-WWE, u-Eric Escobar waphambuka wabelana ngezimvo zakhe ngoMhla oMtsha.
U-Escobar waziva ukuba bobabini uKofi Kingston kunye no-Big E bekufanele ukuba bebekwi-WWE World Champions ngoku. Inkwenkwezi yangaphambili yeWWE ikwabelane ngezimvo zayo ezinyanisekileyo malunga nokuthelekisa phakathi kwamalungu oSuku oMtsha.
Uluhlu lwee-wwe 24/7 zeentshatsheli
U-Eric Escobar uxele ukuba uXavier Woods akakazukufikelela kwinqanaba elifunyenwe nguKofi Kingston kunye noBig E kwimisebenzi yabo. Inkwenkwezi yangaphambili yeSmackDown ithe ayinanto nxamnye neWoods kwaye yancoma ixabiso le-superstar njengomlomo kunye nokuzonwabisa.
'Kwaba bathathu, kwaye ayisiyiyo eyokudubula nabani na, kwabathathu, ndicinga ukuba bobabini u-Big E noKofi bekufanele ukuba bebezintshatsheli ezinobunzima, uyazi, amaxesha ambalwa ngoku. Akukho nto ngokuchasene noXavier Woods, ndicinga ukuba uXavier Woods, ungumlomo omkhulu, kwaye ndicinga ukuba uyonwabisa kakhulu, kodwa andicingi ukuba ufikelele kwinqanaba eliye lafikelelwa nguKofi noBig E, utshilo u-Escobar.
Lo mntwana uza kuba mkhulu: Impendulo kaEric Escobar emva kokudibana noKofi Kingston okokuqala kwiWWE
U-Escobar ubone uninzi lweenkwenkwezi eziphambili ngeentsuku zabo zokuqala kwi-WWE, kubandakanya uKofi Kingston kunye noBig E.
U-Eric ukhumbule ukudibana no-Kingston okokuqala kwi-Deep South Wrestling (DSW). Uqwalasele i-promos ye-Ghanian-American kunye nomsebenzi we-DSW kwaye waqiniseka ngamathemba kaKofi njengenkwenkwezi ephezulu yexesha elizayo.
Ngelixa u-Escobar wabona amandla kaKofi Kingston phantse kwangoko, akazange abe nemvakalelo efanayo xa wayeqala ukubona iBig E isebenza.
U-Escobar kunye no-Big E babeku-FCW kunye, kwaye ekuqaleni wabona i-powerlifter yangaphambili 'njengomnye nje umntu omkhulu kwishishini.' Nangona kunjalo, izimvo zika-Escobar kwi-Big E zatshintshile njengoko wayeqala ukunxibelelana ne-Intercontinental Champion yamaxesha ama-2.
U-Eric wongeze ukuba iBig E inayo charisma yendalo emenza ukuba avele epakethini.
'Ndiyakhumbula okokuqala ndibona uKofi kuMazantsi eSouth, esika iipromo kunye nomlo.' U-Escobar uqhubeke wathi, 'Ndiyazi kwangoko nangoko, ukuba lo mntwana uza kuba yinkwenkwezi. Lo mntwana uya kuba mkhulu. Xa ndabona iBig E kwi-FCW, ndiya kuvuma ukuba khange ndicinge; Ndacinga nje, 'Ewe, ngomnye umntu omkhulu nje.' Kodwa ke ndaqala ukuthetha naye, kwaye ndazi ukuba kukho into apho. Yayiyintoni? Ndiyathetha, unomdla othile. Ndibone ezinye izinto ezinokubakho, kodwa njengoko benditshilo, yenye yezo zinto. Yindlela inkampani eyiphuhlisa ngayo le charisma, loo nto inokwenzeka. '
Ngaba uyazi ukuba uEric Escobar wayeka ukulwa waza waba yipolisa? Fumana konke malunga nohambo lwakhe oluphambili apha. Inkwenkwezi yangaphambili yeWWE yathetha ngoVince McMahon, isizathu sokukhululwa kwakhe, nokunye okuninzi.
Ibhilikhwe yegolide ibuyela kwi-wwe
Ukuba kukho naziphi na iikowuti ezisetyenzisiweyo kweli nqaku, nceda yongeza i-H / T kwi-Wrestling Wrestling ye-Sportskeeda kwaye ungene kwi-UnSKripted yevidiyo.
kutheni umyeni wam endixokisela ngezinto ezincinci
ukuba ngumntu onomdla ngakumbi
isayina umntu onomdla kuwe emsebenzini
imibuzo enzulu eyenza ukuba ucinge
ithatha ixesha elingakanani indoda ukuthandana